Nyocha Akwukwo Igbo - Nyocha akwukwo nso
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Nyocha Akwukwo Igbo
Nyochaa Nyocha Akpọrọ Obi
Enweghi ike bụ otu n'ime netwọk Ọkachamara amara nke ọhụrụ, nke dịkarịrị ala ma aghaghị m ikwu na ha dị oke egwu. Ha na-ejide ha, ma DougC a maara nke ọma n'ụwa. Ọhụụ Ọhụụ na-enye ụzọ dị iche iche ị ga-esi nweta ezigbo ndị ndụmọdụ na-ahụ maka ndụmọdụ gbasara agụmakwụkwọ, gụnyere ịgụ akwụkwọ weebụ, ịgụ akwụkwọ email, nakwa ebe a na-akparịta ụka n'Ịntanet. A na-eji nlezianya nyochaa ọhụụ ọ bụla a na-akwụ ụgwọ site na Ọrịa Ahụ iji jide n'aka na ha bụ ezigbo ọkachamara n'ọrịa. Naanị 5% ndị na-abanye na Access Psychic na-akwụ ụgwọ. Ha na-enyekwa nkwa mmeri 100% ma ọ bụrụ na obi adịghị gị ụtọ na ị gụrụ.
Enweghi ike e hiwere na 2005, site na nke a na-asọpụrụ nke ọma nke na-aga site na aha DougC. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ a bụ 4 afọ, ha egosila na onye ahịa ahụ na-abịa. Ruo taa, Access Acchiciki na-ejide ma na-ejikwa ezi obi ike eme ihe. Usoro nyocha nke uche ha dị na Isi Ihe Mmiri Ahụike.
Nchọpụta maka ịchọta ọgwụ
Enweghi ike bụ otu n'ime ọkpụkpọ anụ ahụ kachasị amasị m n'ihi na ha nwere usoro nyocha nke siri ike. Onye ọ bụla nke na-ekwu banyere Ọgwụ Ahụhụ bụ onye onye nwe ya na-akparịta ụka n'onwe ya. Nke a bụ naanị ihe ị na-enweta mgbe ị na-azụ ahịa na otu obere azụmahịa. Ewepu Isi Iyi Okpukpe, Enweghi ike nwere usoro nyocha ọhụụ kachasị mma ọ bụla n'ebe ọ bụla.
Ebe nrụọrụ weebụ na-enyere ndị mmadụ aka
The Enweghi ike ebe nrụọrụ weebụ dị mfe iji, ma dozie ya nke ọma. Ọ bụghị dị ka ọmarịcha dịka ụfọdụ ọrụ ahụike ndị ọzọ, ma ọ na-arụ ọrụ dị ebube. Ị nwere ike ịzụta nkeji oge site na ebe nrụọrụ weebụ, dozie ọgụgụ ọgụgụ isi, ma kpọtụrụ ndị ahịa nkwado niile na-eji nbanye gị na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mma na ọ bụ site na ngwa ngwa kasị mfe na iji si niile psychic netwọk m na-eji.
Enweghi ike nwere ezigbo mma ahịa maka ndị ahịa ọhụrụ. Mgbe ị na-azụta ị ga - enweta 6 nkeji n'efu. Ị nwere ike iji nkeji maka mkparịta ụka, ekwentị ma ọ bụ igwefoto kamera na-agụ akwụkwọ ọhụụ ọ bụla nke dị n'Ịntanet. Oge nkeji ahụ dị mma karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego maọbụ ọ bụrụ na ị jụọ ọtụtụ mkpirikpi dị mfe ịza ajụjụ.
Obi na-adị m ụtọ mgbe niile Enweghi ike'ngalaba ndị ahịa. Ha na-enye nkwado ekwentị n'oge awa azụmahịa, na ngwụsị izu. Nkwado Email dị 24 × 7. Achọpụtara m mgbe niile na ndị ahịa ha na-eji aka ha eme ihe, ma jiri oge ole na ole m jiri ya mee ihe.